Qiima Darada Soomaaliya Kajirta Sawirkaas ayaa Tusaale kuugu Filan...Maxamed Ciise Koonaa
Thursday November 21, 2019 - 15:21:34 in Articles by G. Good
Kama qayb qaadan dagaalkii 77 , guul qaran ma keenin , Wadaniyada kama heesin oo fanaan ma aha , Bilad dahabka ah soomaaliya uma soo hoyn ,astaantas waxa uu ku mutay wiilkaas Hargeysa oo dhul soomaaliyed ah ayuu calanka soomaaliya ku qaatay.
Goormaa hargeysa Noqotay Telafiif ?
Gormeey noqotay wax la isku abaal mariyo in Hargeysa lagu qaato calan sida laba wadan oo cadawtooyo ka dhaxeysa , ha ogaado madaxweynuhu inuu sidaas ku aqoonsaday jiritaanka somaliland marba haduu uyaqaan in calan lagu qaato hargeysa guul qaran .
Maxuu ku mutay in Madaxweynuhu siiyo Astaanta qaranka wiilkaan ?
Wax kale ma aha wiilkaan ayaa igu sawir hargeysa ka sameeyay ,kadibna Madaxweynaha Ka dalbaday igu Sawir Qaan-gaar ah.
Yaan la qiima tirin wadankaan dadkii usoo dhintay usoo dhaawacmay ,haatana ujiran ee qaranku dayacay
Madaxweyne Wadanigii dhabta ah ee ruuxdiisa wadankaan galiyay meel kuu jirta 60 tilaabo ayuu ku xanuunsanaya 10 sano in kudhow Fadlan asagaa mudan Maamuus ee soo booqo waxna uqabo waa Cabdi Tahliile.
Dowlada madaxweyne Farmaajo waxay Ku Guuldreesatay Isku Keenida Soomaalia Iyo Soomaaliland 3sano inay wada midoobaannayay ayay Taag U weysay, Hada Tabartii waxay Baday Calanka Ciddi Hargaysa Ku Xirata waa Abaal Marinaynaa!!!
Qore :Maxamed Ciise Koonaa